Xasan Shiikh oo dhaqaale dalbaday
25 Dec 25, 2012 - 7:29:12 AM
Madaxweynaha Somalia oo safar ku jooga dalka Uganda ayaa ka dalbaday Dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas inay dhaqaale ku taageeraan dowladiisa, isagoo sheegay in dowladu ay muddo yar u qabtay inay sugto amaanka Muqdisho.
Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdi uu Hogaaminayo oo Maalmahan ku sugnaa Dalka Kenya ayaa waxay gaareen Magaalada Kampala ee Xarunta Uganda Isniintii shalay iyagoo la kulmay Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in kulanka labada Madaxweynuhu uu kusoo dhamaaday jawi wanaagsan, loogana hadlay sidii loo xoojin lahaa howgalada AMISOM ee ay qaybta ka tahay Uganda.
"Muddo kooban ayaan u qorsheynay inaan ku sugno amaanka Muqdisho, waxaana la idinka doonayaa inaad qaybtiina ka qaadataan qorshaha lagu xasilinayo dalka oo dhan" ayuu madaxweynuhu u sheegay Jaaliyada Somalida ee Uganda.
Sidoo kale, Madaxweynuhu wuxuu sheegay in Dowladiisu ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay dalka uga samatabixin lahayd dhibaatada uu ku jiro oo uu ku sheegay mid aad u adag, isagoo xusay in Dowlad Keliya aysan awood u lahayn inay dhibkaas dalka ka saarto.
"Dhaqaale ayaad horay dowlada ugu taageerteen, hadana waxaa la idinka doonayaa inaad sidii oo kale dhaqaale ugu taageertaan" ayuu Xasan Shiikh ku yiri xubnihii Jaaliyada ee uu xalay la kulmay.
Madaxweyaha ayaa ku booriyay dhalinyarada wax ka bartay dalka Uganda inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada dowlada hogaaminaysa si ay dalkooda wax ugu qabtaan, wuxuuna sheegay in dadka maanta isku shuqliya inay dalka dhibaatada ka saaraan ay taariikhda meel wanaagsan ka geli doonaan.